Marka waxaad nidaamka ku hanan kartaa Galaxy Note 10 + (iyo kuwa kale) | Androidsis
Maanta waxaan ku baraynaa Sida loo ilaaliyo nidaamka Galaxy Note 10 + si habboon loo habeeyo iyo Galaxy kale oo wata One UI. Talooyin taxane ah oo ku anfacaya si aad mobilkaaga ugu ilaaliso sida foorida oo aad uga dhigto mid u eg maalintii ugu horeysay ee aad bilowdid
Waxaad isweydiin kartaa sababta ay tahay inaad wax ugu qabato mobilkaaga. Waana si hufan sababta oo ah waxay sii kordhayaan nidaamyo adag, sidoo kale fiiro gaar ah si khiyaano weyn si aad u hesho dayactirka qalabka iyo in xaqiiqdii aadan ogeyn.
1 Nidaamka reboot
2 Qalabaynta otomaatiga ah
3 Kordhi booska iyo kaydinta
4 Sii daa RAM
5 Tilmaamaha qaybaha Dayactirka qalabka
6 Isticmaalaya dib u eegista barnaamijyada: kaydinta barnaamijka oo cad
7 Ka nadiifi nidaamka nidaamka ka soo degsashada Mode
8 Nidaamku ha cusbooneysiiyo
9 Masax faraha
Waxay noqon kartaa isagoo app ku leh asalka Ama waxaan si fudud u dooneynaa in Galaxy Note 10 aan ku bilowno dhammaan nadiifinta ay u baahan tahay. Markaa aan jadwal u sameyno maalin kasta ama maalin kasta oo kale:
Aan aadno Dejinta> Dayactirka Qalabka> Icon leh saddex dhibic oo toosan> Nidaamka dib u bilow.
Waannu dhaqaajineynaa oo waxaan doorannaa maalmaha iyo waqtiga.
Waxaan kugula talineynaa waqtiga subaxa hore qiyaastii 5:00 a.m.
Qalabaynta otomaatiga ah
Tani is-hagaajinta otomaatiga ah ayaa noo oggolaaneysa inaan kaydinno kaydinta iyo nidaamka faylasha keydsan, haraaga iyo kuwa xayeysiinta:
Dejinta> Dayactirka Qalabka> Sumadda 3-dhibic> Is-hagaajinta otomaatiga ah
Waxaan shaqeynaa oo qorsheynaa waqtiga: 3:00 a.m.
Kordhi booska iyo kaydinta
Marka laga reebo inay awoodaan inay sameeyaan nidaamka oo dhan hal mar ka Dayactirka Qalabka, sidoo kale gacanta ayaan ku qaban karnaa kaydinta:
Dejinta> Dayactirka Qalabka> Sumadda 3-dhibic> Kaydinta (oo ku yaal xagga hoose)
Sii daa RAM
Waxaan ku laabaneynaa isla meeshii oo waxa aan sameyn doonno waa Jooji dhammaan barnaamijyadaas kuwa deggan asalka waxayna qaadan karaan RAM badan. Haddii aan ogaanno in moobiilkeenna, furitaankiisa ka dib garan maayo inta barnaamij ee ay gaabiso (dhif iyo naadir ku tahay taxanaha 'Note or S'), waxaan dooran karnaa doorashadan:
Dejimaha> Dayactirka Qalabka> Astaamaha 3-dhibic> Xusuusta
Waxaan bixinnaa "Siidayn"
Tilmaamaha qaybaha Dayactirka qalabka
Waxaan dhigi karnaa marin tooska ah ee Dayactirka Qalabka ama dooro mid ka mid ah 4-ta xarig ee ugu hooseeya ee lagu dhejiyo desktop-ka si dhakhso leh loo helo:
Dejinta> Dayactirka Qalabka> Sumadda 3-dhibic> Ku dhig astaanta Codsiyada
Waxaan u soo qaadannaa astaanta khaanadda barnaamijka miiska.
Waxaan horeyba u helnay marin u heliddii.
Waan awoodnaa saxafad dheer ku samee astaantaas iyo 4-ta marin ee Memory-ka, Kaydinta, Amniga iyo Battery-ga u muuqdaan.
Waxaan gujineynaa mid ka mid ah marin-u-helkan oo waxaan u jiideynaa qayb kasta oo ka mid ah desktop-ka si aad toos ugu hesho.
Isticmaalaya dib u eegista barnaamijyada: kaydinta barnaamijka oo cad
Waxaan u soconaa hubi barnaamijyadooda aan ka muuqan karin isticmaalka ee batteriga Galaxy Note 10:
Waxaan aadeynaa Goobaha> Dayactirka Qalabka> Batariga> Isticmaalka Batariga.
Waxaan hubinaa inaanan helin wax barnaamijka sida Google Play ama Adeegyada Google booska koowaad.
Hadday jiri lahayd, waxay ka dhigan tahay adeegsi xad-dhaaf ah. Had iyo jeerna waa inaad miisaamtaa in barnaamijkaas badanaa la isticmaalo saacadahaas. Xaaladda Netflix, haddii aan isticmaalnay dhowr saacadood, waa inay muuqataa, laakiin mid la mid ah kuwii hore ama mid aan la aqoon, maya.
Waxaan aadeynaa Goobaha> Codsiyada> arjiga aan soo sheegnay> Kaydinta> Waxaan ka nadiifineynaa kaydka dusha sare
Tani waa inay hagaajisaa dhibaatada, laakiin haddii aysan taasi dhicin, aan u gudubno caarada xigta.
Ka nadiifi nidaamka nidaamka ka soo degsashada Mode
Waxaan isticmaali doonaa ikhtiyaarka ah "Wipe Cache Partition" oo ka yimid habka soo dejinta. Tan waxaa had iyo jeer lagula taliyaa ka dib markaad qabato mid ka mid ah cusbooneysiinta nidaamka ee la sii daayo bil kasta. Haddii aad aragto in barnaamijku uu adeegsanayo adeegsi xad-dhaaf ah, iyo sidii aan horay uga faalloonnay, ama nidaamku uusan u fiicnayn sida aan jeclaan lahayn, waxaan u baxnaynaa qaabka soo dejinta:
Waxaan damineynaa qalabka
Waxaan ku riixnaa isla waqtigaas badhanka awoodda iyo furaha kor u kaca
Waxaan sugeynay dhowr ilbiriqsi, waxyar uun kadib markii shaashadda Samsung ay soo muuqatay ...
Waxaan sii deynaynaa iyo waxaan gali doonaa qaabka soo dejinta
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga si aad u aragto nidaamka oo dhan
Oo fadlan raac talaabooyinka sida la tilmaamay. Annagu mas'uul kama nihin wax kasta oo dhici kara, maaddaama qaabkaas soo degsashada ah aan ku sameyn karno dib-u-dejin warshad haddii aadan si sax ah u raacin tallaabooyinka.
Waxaan isticmaalnaa fure hoos u dhig si aad u tagto "Wipe Cache Partition"
Hadda badhanka awoodda si loo doorto ikhtiyaarkaas
Waxaan ku siineynaa «Ok» dabka mar labaad oo tirtiro khasnadda ayaa la sameeyaa.
Hadda waxaan sameynaa "Nidaamka Dib-u-dhiska" iyo moobaylka dib ayaa loo bilaabay.
Nidaamku ha cusbooneysiiyo
Waxaa muhiim ah in aan hubino in nidaamka uu yahay mid casriyeysan tan iyo:
Dejinta> Cusbooneysiinta> Ku hubi gacanta
que dhammaan barnaamijyada Google Play waa la casriyeeyay si aysan u jirin si xun u isticmaalka RAM ama batari. Oo aynu dhex marno Galaxy Store:
Aan aadno Boggaygu wuxuu ka yimid badhanka midigta kore
Cusbooneysiinta waxaanan siinnaa Cusboonaysiin wax walba.
Barnaamijyada nidaamka Samsung sida telefoonka iyo inbadan ayaa badanaa lagu cusbooneysiiyaa Galaxy Store ...
Ugu dambeyntiina, waxaan kugula talineynaa haddii aad ogaato in dareeraha faraha uu ka gaabiyo sidii caadiga ahayd, masax masawirka far xardhan si aad u duubto mid kale. Marar badan ayaa xawaaraha furitaanka Galaxy Note 10 uu soo fiicnaaday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo ilaaliyo nidaamka Galaxy Note 10 + (iyo Galaxy kale)
Sharafta V30 Pro waa la qiimeeyay oo la barbardhigay Huawei Mate 30 Pro oo ay soo saartay AnTuTu